दैवले पनि गरिबलाईनै हेप्ने रैछ ! क्या’न्स’र भएर दुवै हात काटिएका अनिल रुदै भन्छन् म बाच्न चाहान्छु – Namaste Host
March 21, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on दैवले पनि गरिबलाईनै हेप्ने रैछ ! क्या’न्स’र भएर दुवै हात काटिएका अनिल रुदै भन्छन् म बाच्न चाहान्छु
सहयोग को अपिल : क्या’न्स’र भएर हात समे’त दुई पट’क का’टि स’क्दा कतै’बाट सहयोग नजुटे’पछि बै’तडि का अ्निल चन्द भक्तपुरको क्या’न्स’र अस्पताल बाट सहयोग को अपिल गरेका छन ।यि हुन् सुदुर पश्चिमका १९ बर्षिय अनिल चन्द । एक बर्ष अगाडी उनको हातको औंला’मा सानो फुस्रो दाग आएको रहेछ ! दाग हो सन्चो भै हाल्ला नि भनेर यतिकै वास्ता गरेनछन्! तर बिड’म्ब’ना, त्यो त क्या’न्स’र’को सुरुवात र’हेछ ।